जीवनशैली - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
गर्मी तातो हराउन W तरिकाहरू
सम्पादकको पिक अप्रिल 14, 2021 अप्रिल 12, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
गर्मी आउँदैछ जसले तातो ल्याउँछ जुन प्राय: उम्कन गाह्रो हुन्छ विशेष गरी जब तपाईं बाहिर केहि समय रमाइलो गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको समय घाममा सीमित राख्नु महत्त्वपूर्ण छ, हाइड्रेटेड रहनुहोस्, र यदि तपाईं सीधा सूर्यको प्रकाशमा हुनुहुन्छ भने नियमित रूपमा सनस्क्रीन लागू गर्नुहोस्। बच्चाहरूका लागि र आफैंको लागि पनि यी कस्तुरीहरूको बारेमा सावधान रहनुहोस्। यी सावधानी उपायहरू ठाँउमा, त्यहाँ केही अन्य सरल र लागत-प्रभावी तरिकाहरू छन् जुन तपाईं गर्मी तातो हराउन तयार हुन सक्नुहुन्छ!
अप्रिल 13, 2021 अप्रिल 12, 2021 मारी Nives	टिप्पणी छोड्नुहोस्
त्यो कुन विशेष स्पर्श हो जसले तपाईंको घरलाई अनौंठो बनाउँदछ र तपाईंको आफ्नै घर बनाउँदछ? ठीक छ, तपाईंसँग तपाईंको फोटोहरू, आफ्ना प्रियजनहरू र तपाईंको साथीहरूको गुच्छा हुन सक्छ, तर तपाईंको प्यारी साथीहरू के गर्छन्? यदि तपाईंले भर्खरै बुझ्नु भएको छ कि तपाईंसँग आफ्नो घरपालुवा जनावरको साथ राम्रो फोटो छैन भने, यो साँच्चिकै अनौंठो उपहारको साथ उनीहरूलाई चकित पार्ने समय हो - एउटा पालतू पशुहरूको चित्र!
व्यवसाय वा खुशी: २०२१ का लागि लक्जरी यात्रा विचारहरू
सम्पादकको पिक मार्च 27, 2021 मार्च 26, 2021 शेरिल राइट	टिप्पणी छोड्नुहोस्
पछिल्लो बर्षमा विश्व रोकिरहेको छ, धेरै मानिसहरु बाहिर फिर्ता र यात्रा को लागी खुजली छन्। किनकि २०२० मा यति धेरै बिदा वा व्यापारिक यात्राहरू रद्द गरियो, केही यात्रुहरूको पैसा भने उनीहरूको जेबमा प्वाल परेको छ। स्यावी यात्रीहरूले यस यात्रा प्रयोग गरीरहेका छन् उनीहरूको यात्रा अनुभवलाई अपग्रेड गर्नका लागि विश्वबाट ब्याप्ट अप खोल्नका लागि। लक्जरी यात्रा अनुभवहरू पहिले भन्दा अधिक सुलभ र किफायती छन्, र सबैजना आफ्नो अर्को छुट्टीको लागि उनीहरूको अनुभवहरू अपग्रेड गर्न योग्य छन्। चाहे तपाईं व्यापार वा खुशीको लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, जेसुकै यहाँ २०२१ को लागि सबै भन्दा राम्रो लक्जरी यात्रा विचारहरू छन्।
Space अन्तरिक्ष सम्बन्धित क्यारियर तपाईलाई रुचि हुन सक्छ
सम्पादकको पिक मार्च 24, 2021 मार्च 24, 2021 Tracie Johnson	टिप्पणी छोड्नुहोस्
त्यहाँ धेरै छन् अन्तरिक्ष क्यारियर अन्तरिक्ष यात्रीदेखि स्पेस प्रोग्रामको साथ राजनीतिमा काम गर्ने एक व्यक्ति सम्मका उपलब्ध छन्। यी मध्ये प्रत्येक एकदम महत्त्वपूर्ण छ, र तपाईं कुनै पनि उपलब्ध मा ठूलो चासो पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको र क्यारियर पथका लागि तल दिइएका तीन विकल्पहरू मध्ये एउटामा खोजी गरेर तपाईंको सपनाको क्यारियर पत्ता लगाउनुहोस्
संगीत मिक्स गर्ने गल्तीहरू जुन तपाईं अनलाइन संगीत उत्पादन पाठ्यक्रमहरू द्वारा बेवास्ता गर्न सिक्न सक्नुहुन्छ
मार्च 23, 2021 मार्च 22, 2021 trudyseeger	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यदि तपाईंसँग संगीतको उत्पादनको लागि उत्कटता छ भने, तपाईं यसको सबै महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा सक्षम हुनु आवश्यक छ। संगीतको मिश्रण विशेष गरी कठिन हुन सक्छ जबसम्म तपाईं प्राविधिक अध्ययन गर्नुहुन्न किनभने, अन्यथा, तपाईंले केही खास गल्तीहरू गर्नुभयो जुन तपाईंलाई तुरून्त संगीतको मिश्रणमा औपचारिक शिक्षा बिना नै एक नौसिखियाको रूपमा चिह्नित गर्दछ। केहि धेरै सामान्य गल्तीहरू ध्वनि ईन्जिनियरहरूले गर्न सक्दछन् यदि उनीहरू संगीत उत्पादनको बारेमा जान्दैनन् भने:
तपाईंको फोहोर कार्पेट कति हानिकारक छ?
मार्च 22, 2021 मार्च 19, 2021 एलेक्स बेल्से	टिप्पणी छोड्नुहोस्
कालीनहरू बेलायतमा सबैभन्दा लोकप्रिय र फ्लोरिंगको सामान्य प्रकारहरू हुन्। उनीहरूलाई एक कोठामा सान्त्वना दिन, न्यानोपन र इन्सुलेशन प्रदान गर्न, र विलासिताको भावना थप्न भनिन्छ।
तर यदि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंको कार्पेट हानिकारक हुन सक्छ? के तपाईं यदि यो पत्ता लगाउनु भएको थियो भने, यो सामान्य घर सुविधा भित्र लुकेका, तपाईं र तपाईंको घर को लागी सम्भावित खतरों को एक सीमा हो? यद्यपि चिन्ता लिनु पर्दैन, यस लेखमा हामी तपाईंलाई समाधानहरू देखाउनेछौं!
विकास - मानिस र वानर
मार्च 17, 2021 मार्च 16, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
बाइबलले मानिसजातिलाई उनीहरूको जीवनमा प्रमाणित गर्न प्रोत्साहित गर्दछ कि तिनीहरू छैनन् होमो सेपियन्स Ape बाट विकसित भयो। धर्म यो भेदभाव गर्न संसारमा आएको थियो। त्यहाँ मानिस र वानरमा ठूलो समानता छ। दुबै समान शारीरिक कद छन्। दुबैको शरीरमा कपाल छ। मानिस वानलाई होमो सेपियन्स पनि भनिन्छ। कोही भन्छन् कि पुरुष र महिलाको मुख्य आध्यात्मिक कामचाहिँ उनीहरूलाई कसरी वुद्धिमानी भन्ने हो भन्ने पत्ता लगाउनु हो।
Transport यातायातमा पैसा बचत गर्ने अप्रत्याशित तरिकाहरू
सम्पादकको पिक मार्च 16, 2021 मार्च 15, 2021 एलेक्स बेल्से	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यो चुनौतीपूर्ण समय हो, र धेरै व्यक्ति लागत घटाउने र पैसा बचत गर्ने तरिकाहरू खोज्दैछन्। दैनिक जीवनको सब भन्दा महँगो यात्राहरू मध्ये एक हाम्रो यातायात हुन सक्छ - त्यो काममा आउने माध्यमबाट हो, परिवारको भ्रमण गर्दै, फुर्सतको लागि यात्रा गर्दै, वा अधिक।
भाग्यवस, त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईंले यातायातमा पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ, यसले तपाईंको समग्र खर्चहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा कम गर्दछ। केहि अधिक प्रयास गरिएका र परिक्षण गरिएका सुझावहरूमा केवल कम यात्रा गर्नु, कार मर्मतसम्बन्धमा छुट खोज्नु, राम्रो ईन्धनको मूल्यहरूको लागि वरिपरि किनमेल गर्नु, र अधिक समावेश छ।
विन्डोजलाई कोठाको फोकल पोइन्ट कसरी बनाउने
मार्च 14, 2021 मार्च 13, 2021 एम्मा विलियम्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यो घर पुन: डिजाइन र redecorating सजिलो छैन। के तपाईं त्यो कार्पेट बदल्नुहुन्छ? हुनसक्छ तपाईंलाई पेन्टको नयाँ कोट चाहिएको छ? हुनसक्छ फर्निचरले अपडेट प्रयोग गर्न सक्दछ। वास्तवमा, सबैभन्दा ठूलो समस्याहरू कहाँ सुरु गर्न सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाई विन्डोजबाट सुरू गर्नुहोस्। सही तरिकाले सेट अप गरिएको विन्डो पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सक्दछ जुन कोठा कस्तो देखिन्छ र महसुस गर्दछ। तपाईंको घरमा भर्खरै बहेको सबै अतिरिक्त प्राकृतिक प्रकाशले भिन्नताको संसारलाई भन्न सक्दछ। तिनीहरूलाई तपाईंको कोठाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा राख्नु हाम्रो दिनको विषय हो।
5 मा तपाईंको जीवन सुधार गर्न 2021 तरिकाहरू
सम्पादकको पिक मार्च 13, 2021 मार्च 12, 2021 सियरा पावेल	टिप्पणी छोड्नुहोस्
जब २०२१ मा मानिसहरू अगाडि बढ्न जारी रहन्छ र जीवन सामान्य स्तरको केही स्तरमा फर्कन्छ, २०२० लाई पछाडि पार गर्ने चुनौतिहरूबाट मुक्त हुनका लागि उपायहरू पत्ता लगाउनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अलग समय र अधिक तनावमा बिताएपछि, २०२१ एक बर्ष हुन सक्छ जहाँ मानिसहरूले तिनीहरूको जीवन सुधार गर्छन्। त्यहाँ पाँच तरिकाहरू र सुझावहरू छन् जुन अनुसरण गर्न सकिन्छ जुन कोहीले पनि आफ्नो जीवन सुधार गर्न सक्दछ।
6 तरिका तपाइँ पर्यावरणलाई हानि पुर्‍याउने र कसरी रोक्न!
सम्पादकको पिक मार्च 11, 2021 मार्च 10, 2021 एलेक्स बेल्से	टिप्पणी छोड्नुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ वातावरणलाई हानि पुर्‍याउने धेरै व्यक्तिहरूले उनीहरूले यो गरिरहेको महसुस गरेनन्?
वातावरणीय क्षतिहरू केवल ठूला निगमहरू, हानिकारक उत्सर्जन, वा विश्वव्यापी प्रदूषणद्वारा विशाल पैमानेमा मात्र होइन। यो हाम्रो घर वा कार्यस्थलहरूमा पनि साना तर महत्त्वपूर्ण तरिकाहरूमा हुन्छ।
यद्यपि, जानेर तपाईंले वातावरणलाई हानि पुर्‍याउन सक्नुहुने सूक्ष्म तरीकाहरू दैनिक आधारमा, तपाईं यसको सट्टामा यसलाई मद्दत गर्न परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। केहि सानो तर ध्यान दिईएको समायोजनका साथ तपाई आफ्नो दैनिक तालिका, घर, र कार्यक्षेत्र वातावरण-मैत्री तरिकामा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुनेछ।
सम्पादकको पिक मार्च 8, 2021 मार्च 8, 2021 एलेक्स बेल्से	टिप्पणी छोड्नुहोस्
शून्य उत्सर्जन भएको कारको कल्पना गर्नुहोस्, खरीद मूल्य बन्द the 3,500 को सरकारी सब्सिडी, र कर-मुक्त छ। ओह, र यसलाई आवश्यक छ कम मर्मत, कम चलिरहेको लागत छ, र लगभग कुनै शोर सिर्जना गर्दछ।
यो कार केवल कल्पना मात्र होइन, यो आज an को रूपमा अवस्थित छ बिजुली वाहन (EV) तर यी सबै फाइदाहरूको बावजुद, इलेक्ट्रिक कारहरू मात्र १-२% बेलायतको वार्षिक कार बिक्रीमा पर्छन् - त्यसो भए किन धेरै युके चालकहरू ईभीहरू खरीद गर्दैनन्?
नयाँ युगको विकास - एक परिवर्तित विश्व
सम्पादकको पिक मार्च 7, 2021 मार्च 7, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सृष्टिको पहिलो दिनमा परमेश्वरले भन्नुभयो कि त्यहाँ उज्यालो होस् र त्यहाँ नयाँ युग सुरु हुनको लागि प्रकाश थियो। नयाँ युग आन्दोलन विश्व एकता र शान्तिको लागि एक आन्दोलन हो। यो धर्म र राष्ट्रहरुलाई एकताबद्ध गर्न एक आन्दोलन हो। नयाँ युगको लक्ष्य भनेको युद्ध रोक्नु हो। आज तेस्रो आणविक युद्धको खतरामा बाँचिरहेका नयाँ युगको विकास अत्यन्त महत्त्वको हुन्छ। इसाई धर्मको प्रतिनिधित्व गर्दै पोप फ्रान्सिसले बुढेसकाल र नयाँ युग बिच शान्तिको वार्तालाप गरिरहेको छ। आज ऊ इराकको भ्रमण गर्दैछ.
सम्पादकको पिक मार्च 3, 2021 मार्च 2, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक मार्च 2, 2021 मार्च 1, 2021 मिगुएल टोरनेर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
विकासोन्मुख समुदाय र गरिब क्षेत्रको सुधारको सवालमा चर्चले अग्रपंक्तिमा काम गर्दछ। गरिबहरूको लागि समर्थन र हेरचाहको लामो समयदेखि आयोजित विरासतलाई चर्चहरूको लागि "रोबिन हूड" को उपाधि मिल्यो। यद्यपि त्यस्ता दृष्टिकोणले कहिलै पनि प्रभावकारी परिणामहरू प्रदान गर्दैन। विस्तृत रूपमा भन्नुपर्दा यी दृष्टिकोणहरू समान वितरणको तुलनामा सम्पन्नताको जबरजस्त संचलन हो। शुद्ध अभिप्राय र समर्पित उपायहरूको बाबजुद चर्चले गरिबी निवारणको मौद्रिक हिसाबले प्रायः क्षणिक फाइदाहरू हुन्छन्। छोटो अवधिको समाधान र भौतिक रूपमा गरिबहरूको अवस्था सुधार गर्ने प्रयासले उनीहरूलाई मौद्रिक रूपमा चर्चमा निर्भर बनायो।
मार्च 1, 2021 फेब्रुअरी 28, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सम्पादकको पिक मार्च 1, 2021 फेब्रुअरी 27, 2021 Dmytro Spilka	टिप्पणी छोड्नुहोस्
फेब्रुअरी 28, 2021 फेब्रुअरी 27, 2021 सिल्भिया जेम्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
बोटमा आधारित प्रोटीनको बारेमा सब भन्दा सामान्य गलत धारणा मध्ये एक हो कि उनीहरूले मासुमा आधारित प्रोटीनको रूपमा प्रभावकारी रूपमा प्रोटिन प्रदान गर्दैनन्। शरीर सौष्ठवकर्ताहरू बीच शाकाहारी भोजन अत्यधिक गलत अर्थ लगाइन्छ, र शाकाहारी आहारमा भएको दावी गरेको व्यक्ति सधैं जिमबाट हाँस्दछन्।
जस्तै नुजेस्ट क्लीन लीन प्रोटीनधेरै प्लान्टमा आधारित प्रोटीन पशु प्रोटीन जत्तिकै प्रभावकारी देखिए, र मानिसहरूले यसको लागि आधुनिक चिकित्सा अनुसन्धानलाई धन्यवाद दिन सक्दछन्।
फेब्रुअरी 28, 2021 फेब्रुअरी 27, 2021 मिगुएल टोरनेर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
गरिबी निवारणको कुरा गर्दा कसैको दिमाग पार गर्ने विशिष्ट परिप्रेक्ष्यले बन्चित क्षेत्रहरू र विश्वव्यापी क्षेत्रहरू विकास गर्दैछ। विपन्न वर्गलाई आवश्यक संसाधन प्रदान गर्नु र आधारभूत आवश्यकताको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु गरिबी उन्मूलनका लागि सामान्य विचार हो। जबकि यी विकासात्मक उपायहरू सरकारको जिम्मेवारी हो, बाइबलले यस व्यापक विश्वव्यापी समस्याको लागि फरक परिभाषा र समाधान प्रस्तुत गर्दछ।
फेब्रुअरी 26, 2021 फेब्रुअरी 25, 2021 डेनियल भोस	टिप्पणी छोड्नुहोस्
घरको लागि नयाँ फर्निचर किन्नु धेरै उत्साहजनक छ, विशेष गरी उनीहरूलाई जो कि किनमेल गर्न जान मन पराउँछन्। हस्टन TX मा फर्नीचर स्टोर, तपाईको घर र व्यवसायको लागि उत्तम फर्नीचर फेला पार्न विश्वव्यापी रूपमा धेरै प्रख्यात छन्। कोठामा सजावटका लागि तपाईले धेरै राम्रा फर्नीचर फेला पार्न सक्नुहुनेछ। उत्तम फर्नीचर फेला पार्न यो सजिलो हुन सक्दैन किनकि त्यहाँ ह्युस्टनमा थुप्रै सुन्दर फर्नीचरका टुक्राहरू छन्, TX फर्नीचर स्टोरहरू।
सम्पादकको पिक फेब्रुअरी 25, 2021 फेब्रुअरी 25, 2021 एलेक्स बेल्से	टिप्पणी छोड्नुहोस्
विज्ञहरू भन्छन् कि एक विशिष्ट यात्री कार २००,००० माईल वा अधिकको लागि लामो हुनुपर्छ। तर हामी मध्ये अधिकांशको लागि सत्य यो छ कि यो पुरानो महसुस गर्न थाल्छ र त्यो भन्दा चाँडो धेरै लगाउँछ!
तपाईंले केही असामान्य ध्वनिहरू, ग्रिडिंग, वा कम्पित हुने कुरा देख्नुभयो जुन तपाईंको कार समग्रमा कम सजिलो छ, वा यो कुनै खास मौसममा स strugg्घर्ष गर्दछ। यदि तपाईं दुई सय हजार मार्कको लजालु हजारौं माईल हुनुहुन्छ भने, यो निराशाजनक हुन सक्छ।
फेब्रुअरी 24, 2021 फेब्रुअरी 23, 2021 स्टेला राइन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
जन्मको क्षणदेखि स्कूल प्रवेश गर्न, एक बच्चा एक गाह्रो भन्दा, तर संसारलाई चिन्ने चाखलाग्दो मार्गबाट ​​पार हुन्छ। के सम्भव छ र के छैन, के यसको स्वाद, गन्ध, जस्तो लाग्छ। उसले पहिलो कदम चाल्छ र आफ्नो पहिलो शब्दहरू भन्छ। उसले भाँडो प्रयोग गर्न सिक्छ र साधारण असाइनमेन्ट पूरा गर्न। स्कूल विकासको नयाँ चरण बन्छ, तत्परताको लागि, जसको लागि, यद्यपि यसको उत्तीर्णको सफलता निर्भर गर्दछ।
फेब्रुअरी 24, 2021 फेब्रुअरी 23, 2021 मौन बीकन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
आजकल मानिसहरू पानीको सुरक्षाको बारेमा धेरै सजग छन् र पानीको वरिपरिको ठाउँमा सुरक्षित रहन सबै चीजहरू जान्न चाहन्छन्। सबै जना पोखरीमा रमाउन, पानी खेल खेल्न र नदीहरू, समुद्र, ताल, र अन्य पानी ठाउँहरूमा र नजिक हुँदा सुरक्षित रहन चाहन्छन्। तर पानीको डर र फोबिया सधैं बाटोमा रहन्छन्। त्यसकारण, जब पानी सुरक्षा र डुब्नुको जोखिमले तपाईंको दिमागलाई प्रहार गर्दछ, पहिलो चीज जसले तपाईंलाई हिर्काउन सक्दछ तैरिने पाठ हो। र ध्यान दिनुहोस्, पौंडी पाठहरू त्यस्तो चीज हुन् जुन तपाईंलाई सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ! पौंडी पाठले सुरक्षाको तहको रूपमा काम गर्दछ जब तपाईं डुब्न वा पानीमा गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ।
फेब्रुअरी 23, 2021 फेब्रुअरी 22, 2021 हव्वा एन्डरसन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
राम्रो मौखिक स्वास्थ्य प्राप्त गर्न जीवनभर हेरचाह लिन्छ। दाँत माझ्नु पर्याप्त छैन। तपाईंले स्वस्थ दन्त स्वच्छता बानी विकास गर्न र सही मौखिक देखभाल उत्पादनहरू प्रयोग गर्न आवश्यक छ। तपाइँलाई मद्दत गर्न यहाँ सात सुझावहरू छन्।
१. नियमित रूपमा फ्लस
जबकि टुथब्रश राम्रो मौखिक स्वास्थ्य कायम राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ, यसले तपाईंको दाँतको बिचको खाद्यान्न कणहरू हटाउन सक्दैन। यसैले फ्लोसिing सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो दन्त स्वच्छता बानी.
सम्पादकको पिक फेब्रुअरी 21, 2021 फेब्रुअरी 20, 2021 सोफिया विलियम	टिप्पणी छोड्नुहोस्
२०२० मा, सम्पूर्ण विश्व लकडाउनबाट ग्रस्त भयो। लकडाउनका कारण धेरै व्यक्तिले आफ्नो जागिर गुमाए जुन नियमित खर्चहरू प्रबन्ध गर्न गाह्रो भयो। यस्तो अवस्थाबाट जोगिन, तपाईंले जहिले पनि पैसा बचत गर्नुपर्दछ। यस बर्षमा, तपाईंले रिजोलुसनहरूको सूची तयार गर्नु भएको हुन सक्छ, तर पैसा बचतमा ध्यान केन्द्रित गर्न नबिर्सनुहोस्। यस वर्ष तपाईलाई अधिक पैसा बचाउन मद्दतको लागि, हामीले उत्तम पैसा बचाउने सल्लाहहरूको एक सूची संकलित गरेका छौं। त्यसोभए समय बर्बाद नहोस् र यी विशेषज्ञ सल्लाहहरूको साथ अधिक पैसा बचत गर्नुहोस्।
फेब्रुअरी 20, 2021 फेब्रुअरी 19, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
परमेश्वरले संसारमा स्वतन्त्रताको चाहना राख्नुभयो। स्वतन्त्रताको चाहनालाई कोही शत्रुले भनेका हुन्छन् र अरूले भने परमेश्वरको रहस्य।
आदम र हव्वालाई माटोबाट बनाइएको थियो र अदनको बगैंचामा राखिएको थियो। अदनको बगैंचामा शान्ति र शान्ति थियो। पृथ्वीमा भएका सबै रूखहरूको फलबाट खान रोज्न आदम र हवासँग स्वतन्त्र हात थियो। बगैंचामा केवल एउटा रूखलाई उनीहरूका लागि निषेधित फलहरू भनिन्थ्यो जसरी उत्पत्ति १ मा भनिएको छ: र परमेश्वरले आदमलाई बगैंचाको सबै रूखहरू खानु भनेर आज्ञा दिनुभयो जुन तपाईं खान सक्नुहुन्छ, तर असल र खराबको ज्ञानको रूखबाट तपाईंले खानु हुँदैन। जुन दिन तपाईं यसलाई खाईन्छ त्यो दिन तपाईं मर्नुहुनेछ।
सम्पादकको पिक फेब्रुअरी 20, 2021 फेब्रुअरी 19, 2021 सियरा पावेल	टिप्पणी छोड्नुहोस्
जे भए पनि छुट्टी केहि छैन, तपाईको परिवारको लागि ठूलो उपहार पाउने जस्तो केही छैन। तिनीहरूको अनुहारमा आनन्द र उत्साह देखेर आफैले उपहार पाउनु भन्दा उत्तम हुन्छ। जे होस् तपाई आफ्नो परिवारलाई चिन्नुहुन्छ र उनीहरूलाई के मनपर्दछ वा केमा रुचि राख्दछन् भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ, त्यस्ता अवस्थाहरू पनि हुन सक्छ जब तपाईले कुन उपहार रोज्नु हुन्छ भनेर निश्चित हुनुहुन्न। उपलब्ध सबै शानदार उपहारहरूको साथ, यो निर्णय गर्न गाह्रो हुन सक्छ उत्तम के हुन सक्दछ। यो overthink छैन प्रयास गर्नुहोस्। ती शीर्ष १० सूचीहरू वा भिडियोहरू प्रयोग नगर्नुहोस् जुन उनीहरूले वास्तवमै मद्दत गर्न भन्दा अधिक बिक्री गर्छन्। यो लेखले तपाईको परिवारले मन पराउने पाँच अनौंठो उपहारहरू पत्ता लगाउँदछ।
फेब्रुअरी 18, 2021 फेब्रुअरी 17, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
आत्महत्याको मुख्य कारण डिप्रेसन हो। डिप्रेसन धेरै माने मानिसहरूमा आउन सक्छ। यो मानिसमा आउन सक्ने एक तरिका गरीबी हो। जब एक व्यक्ति सम्पन्न जीवनको अभ्यस्त हुन्छ, र धेरै कारणहरूले उसले आफ्नो धन गुमाउँछ, यो डिप्रेसनको कारण हुन सक्छ आत्महत्यासमेत। गरिब मानिस गरिबीको तनावमा बाँचिरहेका पनि खुशी हुन सक्छन् जब उनीहरूसँग न्यूनतम जीवनको आवश्यकता हुन्छ खाना, आश्रय र मित्रता। गरीब व्यक्तिहरू आफैं र आफ्नो परिवारको हेरचाह गर्न कडा परिश्रम गर्छन् जसले उनीहरूलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ यदि उनीहरूसँग कम आय जीवन भन्दा बढी छैन भने पनि।
कोशेर भोजन एक आध्यात्मिक बाइबलीय परम्परा
यहूदी मानिसहरूमा परम्परा छ बाइबलीय समयमा फेरि आफ्नो भान्छामा मासु र दूध छुट्याउने। कोशेर रेस्टुरेन्टहरूमा यो सम्भव हुन सक्छ कि श्वर्माको साथ पिटा, वा बर्गरको साथ पिटा अर्डर गर्न तर पनीर बर्गर होइन। म्याकडोनाल्ड्सले प्याज र तरकारीहरूसहित पनीर बर्गर प्रस्ताव गर्नेछ जुन मानवताका लागि रमाइलो हुन सक्छ तर अर्थोडक्स र परम्परागत यहूदीहरूको लागि एउटा प्रलोभन जुन तिनीहरूले उपभोग गर्न अस्वीकार गर्छन्। केही पिज्जा पसलहरूले पिज्जा पाइमा सलामी प्रस्ताव गर्न सक्दछन्; तर कोशेर पिज्जा स्टोरमा तरकारी, प्याज, च्याउ र जैतुन मात्र हुन्छ।
कसरी उत्तम बीन झोलाहरू छनौट गर्ने?
जनवरी 29, 2021 जनवरी 28, 2021 तरुण	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सिमीको झोलामा पनि घरमा आराम गर्न सम्भव छ: यो वस्तुले तपाईंलाई आफ्नो ठाउँ धेरै अनौपचारिक तरिकामा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छ। बाहिरी कोटिंगले तपाईंलाई सफा गरेको समय कम गर्न मद्दत गर्दछ, विशेष गरी यदि यो अशुद्ध छाला वा पीवीसी हो।
बाहिरी भाग दुर्लभ अवस्थामा बाहेक, पॉलिएस्टर वा फोम रबरले बनेको हुन्छ जसले संरचनालाई नरमता दिन्छ र अbs्गहरू राम्रोसँग फैलाएको सुनिश्चित गर्दछ।
एक राजा बिना मान्छे - कोरोना महामारीको समयमा बाइबल सिक्दै
जनवरी 27, 2021 जनवरी 28, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
परमेश्वर ब्रह्माण्डका राजा हुनुहुन्छ। ऊ अज्ञात ठाउँमा आफ्ना मानिसहरूबाट लुकेको छ। उहाँको न्याय अज्ञात छ। विश्व कोरोना महामारीबाट ग्रस्त छ। संसारले सुरु tunको अन्त्यमा प्रकाश खोज्दैछ।
बाइबलले संसारको सृष्टि गर्दछ जुन बाइबलका प्रथम शब्दहरूमा लेखिएको छ, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। यस सुरूको बारेमा त्यहाँ एक प्रश्न छ। कोही भन्छन् कि शुरुआत विगतमा लाखौं वर्ष थियो। अरूले चाहिं ग्रह पृथ्वीमा मानिसको ज्ञात सृष्टि हुनुभन्दा छ दिन अघि सुरुलाई औंल्याउँछन्। मानिस सृष्टिको छै दिनमा सृष्टि गरिएको थियो जनावरहरू लगायत अन्य सबै सृष्टिहरू पछि। परमेश्वरले आदमलाई यस पृथ्वी, ग्रह पृथ्वी दिनुभयो। आदमले पृथ्वीमा भने जस्तै यसो गरे “समुद्रका माछाहरू, आकाशका चराचुरू ,्गीहरु अनि पृथ्वीमा बस्ने सबै जीवित प्राणीहरुमाथि शासन गर्नु हो।”
सम्पादकको पिक जनवरी 25, 2021 जनवरी 24, 2021 रोबर्ट मोमेन्ट	टिप्पणी छोड्नुहोस्
तपाईंले सम्भवत यो 'नक्कली इट टिल बनाउनुहुन्छ' भन्ने शव्द सुन्नुभएको छ, योभन्दा पहिले। जब यो व्यापारको कुरा आउँदछ, यो मूल्यवान सल्लाह हुन सक्छ जब तपाईं पहिलो पटक सुरू गर्नुहुन्छ। तर धेरैको लागि, 'यसलाई नक्कल गर्नु' धेरै लामो समयसम्म बोक्छ र कसैको सफलताको लागि हानिकारक हुन सक्छ। Imposter सिंड्रोम गहिरो तपाईंको व्यवसाय वा क्यारियर प्रगति मा असर गर्न सक्छ; महिला उद्यमी विश्वभरि पहिले भन्दा बढि 'प्रबल' जस्तो महसुस भएको छ।
जनवरी 21, 2021 जनवरी 20, 2021 नीती सैनी	टिप्पणी छोड्नुहोस्
कसैको श्रृंगार गर्नु एक आत्मीय अनुभव हो। ती सबैको बारेमा अनुभव बनाउनुहोस्। तिनीहरूलाई प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। ग्राहकहरू मानिस हुन् र व्यक्ति आफैले कुरा गर्न मन पराउँछन्। तिनीहरू एक अनुभव प्राप्त गर्न चाहन्छन्। तपाईंको मेकअप पूरा गरिसकेपछि लग्जरी सेवा हो। उनीहरूको मेकअप नियमित रूपमा सम्पन्न गर्ने सबैभन्दा उच्चभ्रू व्यक्तिहरू, अझै पनी निश्चित आरामदायक लाड प्यार अनुभवको अपेक्षा गर्दछन्, जब ग्राहकले उनीहरूको मेकअप नियमित रूपमा वा गरिरहेको छैन भने यो अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सम्पादकको पिक जनवरी 21, 2021 जनवरी 20, 2021 रोबर्ट मोमेन्ट	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यी दिनहरू जीवन द्रुत गतिमा अघि बढ्दछन्, र हामी प्रायः दिन प्रति दिन यति व्यस्त हुन्छौं कि हामी विराम गर्न बिर्सन्छौं। त्यसोभए, हामीले १२ लाई उजागर गर्नु अघि जीवन कोचिंग तपाईंको सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन्ने चरणहरू, यी life जीवन कोचिंग प्रश्नहरूमा प्रतिबिम्बित गर्न केहि समय लिनुहोस्:
यस क्षणमा, म आफैंको उत्तम संस्करण जस्तो महसुस गर्छु?
यदि म आज मेरो सबैभन्दा राम्रो संस्करण हुँ भने, त्यो कस्तो देखिन्थ्यो?
यदि मेरो आफ्नै संस्करणको रूपमा देखाईरहेको भए मेरो जीवन कसरी फरक हुने थियो?
जनवरी 20, 2021 जनवरी 19, 2021 पाइज वाल्टर	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, आँगन बाहिरको खाली ठाउँ हो जुन मनोरञ्जन वा भोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। आँगन प्रायः घरसँग मिल्दछ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका आँगनहरू छन्, जस्तै बहुस्तरीय, एल-आकारको, wraparound, U- आकार, अलग, र एक प्रविष्टि-स्तर आँगन। आँगनको किसिमले निर्माण गर्ने निर्णयले उनीहरूसँग कति ठाउँ र डिजाइन उनीहरूले मन पराउँदछ। त्यहाँ आँगन सतहहरु को लागी एक को छनौट गर्न को लागी बिभिन्न विकल्पहरु छन्। यसमा बालुवा, टाइल, फ्ल्यागस्टोन, फुटपाथ, माटोको ईट्टा, काटिएको ढु stone्गा, क concrete्क्रीट र बजरी समावेश छ।
जनवरी 20, 2021 जनवरी 19, 2021 एन्थोनी सेरुलो	टिप्पणी छोड्नुहोस्
COVID-१ p महामारीले देश र संसारमा बगाउन अघि नै, तपाईंको परिवार चिकित्सकहरूले पारिवारिक औषधि प्रयोग गर्ने तरीकालाई रूपान्तरण गर्न भर्खरको संचार प्रविधिहरूको फाइदा लिन थालेका थिए।
"Telehealth," फराकिलो शब्दले तपाइँका डाक्टरहरूले तपाइँको स्वास्थ्य लाई टाढाबाट राख्नका लागि प्रविधि प्रयोग गर्ने तरीका वर्णन गर्दछ, COVID को युगमा नयाँ प्रतिष्ठा लिएको छ।
चालु र ट्र्याकमा चोटपटकको खुट्टा र गोदा
सम्पादकको पिक जनवरी 19, 2021 जनवरी 18, 2021 Lena Hemsworth	टिप्पणी छोड्नुहोस्
अधिकांश धावकहरू उनीहरूको प्रशिक्षणको क्रममा विभिन्न चोटपटक लाग्छ ती घाइते मध्ये केहि खुट्टा वा खुट्टा मा केहि दिन को लागी कडा पीडा पैदा गर्न सक्छ, जबकि अरूहरु भविष्य मा अधिक समस्या पैदा गर्न सक्छन्। जे भए पनि तिनीहरू प्राय: जसो हुन्छन्, तिनीहरू सहजै छैनन्, र प्रायः धावकहरूले तिनीहरूलाई बाइपास गर्न रोज्नेछन्।
भाग्यवस, त्यहाँ बिभिन्न चीजहरू छन् जुन प्राय फिटनेस प्रेमीहरूले घाइतेहरू रोक्नको लागि गर्न सक्छन् जुन उनीहरूको दैनिक प्रशिक्षणको क्षमतालाई असर गर्दछ। कसरत गर्न मन पराउने सबै व्यक्तिहरू कसरी चलाउने र व्यायाम गर्ने भन्ने बारे सिक्नुपर्दछ किनकि यो चोटपटक रोक्नको लागि उत्तम तरिका हो।
गाढा रातो लाईट अप गर्नका लागि एलईडी टार्चको मार्गदर्शन
सम्पादकको पिक जनवरी 14, 2021 जनवरी 13, 2021 ढोका काम गर्दै	टिप्पणी छोड्नुहोस्
सुरक्षाकर्मीहरूको लागि पूर्ण र उज्यालो बीमको साथ भरपर्दो एलईडी टर्च व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि एक अमूल्य साधन हुन सक्छ, यसले राम्रो काम प्रदर्शनको लागि सक्षम गर्दछ। अर्को तर्फ, एक अवर मोडेलले यसको प्रयोगकर्तालाई सबै प्रकारको अप्रत्याशित समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
यदि एक ह्यान्ड-होल्ड टर्च प्रयोग गर्नु तपाईंको कामको हिस्सा हो भने, तपाईंलाई थाहा छ कि एलईडी टर्चको भन्दा बजारमा यसभन्दा राम्रो विकल्प अरू के नै छैन।
यस उपयोगी गाईडमा हामी यी प्यारा साना प्रकाश-प्रकाशकहरूलाई विस्तृत रूपमा हेर्नेछौं। तिनीहरू के बनेका छन्? तिनीहरूले कसरी काम गर्छन्? र यदि तपाई एउटा खरीद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईले के हेर्नु पर्छ।
जनवरी 14, 2021 जनवरी 13, 2021 एम्मा विलियम्स	टिप्पणी छोड्नुहोस्
यो हरेक धूर्त व्यक्तिको आफ्नै व्यक्तिगत कार्यशाला राख्न इच्छा छ। जे होस्, घर प्रायः त्यस्तै आकांक्षाहरूको लागि धेरै सानो हुन्छ तर भाग्यवश ग्यारेज एक राम्रो विकल्प हो। त्यहाँ, तपाईं एउटा सानो कार्यशाला सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ जहाँ तपाईं आफ्नो खाली समय, सोरिंग, मेन्डि,, र सबै प्रकारका संकुचन वेल्डिंगमा खर्च गर्नुहुन्छ।
जस्तो यसको नामले स .्केत गर्दछ, ग्यारेज तपाईंको कार हाउजि isको लागि हो। थप रूपमा, ग्यारेज एक महान भण्डारण ठाउँ हो तर तपाईं वास्तवमा कारबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न बाहिर राख्दै घरले त्यसको शरीर नष्ट गर्दछ। त्यसकारण, तपाईंको पसल गाडीको वरिपरि बनाउनुहोस्, अर्थात् कुनै चीजलाई नोक्सानी नगरी सजिलै पार्क गर्न सम्भव बनाउनुहोस्।
बच्चाहरू लुगाहरू: ग्रीष्म Inतुमा कस्ता किसिमका लुगाहरू किन्नुहोस्?
जनवरी 12, 2021 जनवरी 11, 2021 डेनियल भोस	टिप्पणी छोड्नुहोस्
ग्रीष्म ofतुको आगमनसँगै, आमाबुवाहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको उनीहरूका साना केटाकेटीहरूको लागि सही प्रकारको कपडा छनौट गर्नु हो जसले तिनीहरूलाई आरामदायी, राम्रो, र दिनभर वा रात लामो शान्त राख्दछ। यो आमाबाबुको लागि चुनौतीपूर्ण काम हुन सक्छ। केटाकेटीले त्यस्तो प्रकारको कपडा लगाउनुपर्दछ कि तिनीहरूलाई दिनको तातोतमै पनि तातो र चिसो स्थितिमा खुशी र आरामदायी राख्न सक्दछ।
भगवानको ज्योति कोरोना अन्धकारको बीचमा प्रकट भयो
सम्पादकको पिक जनवरी 11, 2021 जनवरी 11, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान	टिप्पणी छोड्नुहोस्
आध्यात्मिकताका दुई माध्यमहरू धर्म र विश्वव्यापी विश्वास हुन्। यहूदी धर्मले यहूदीहरूलाई आफ्ना अगमवक्ता मोशाबाट तोरह स्वीकार्न सिकाउँदैछ। तोराहले यहूदीहरूलाई स्वर्गमा परमेश्वरको सेवा गर्न आफ्नो इच्छा र बुद्धिको समर्पण गर्नु पर्ने दायित्व के हो भनेर निर्देशन दिन्छ। ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्तालाई बुझ्नको लागि ईश्वर बुद्धि भन्दा माथि छ। तोरह मोशाद्वारा यहूदीहरूलाई दिइएको परमेश्वरको वचन हो। तोरहको शिक्षालगायत तोराहको आज्ञाहरू गरेर, तोराहले यहूदी मानिसहरूलाई एउटा राष्ट्र बनाउँदछ।
यूट्यूब संगीत बनाम Spotify - कुन राम्रो संगीत स्ट्रिमिंग सेवा हो?
सम्पादकको पिक जनवरी 6, 2021 जनवरी 5, 2021 मार्क ट्वेन	टिप्पणी छोड्नुहोस्
Spotify वापसी संगीत भिडियो र पोडकास्ट प्रसारण को एक विस्तृत डाटाबेस हो। रेकर्डका अनुसार यसमा निजी र लोकप्रिय कम्पनीहरू र रेकर्ड लेबलहरूको 50० लाख भन्दा बढी गीतहरू हुन सक्छन्। अडियो सामग्रीको संख्या समयसँगै बढ्दछ किनकि अधिक निजी लेबल कलाकारहरूले तिनीहरूको ब्यान्डहरूको लागि जागरूकता सिर्जना गर्न Spotif प्रयोग गर्दछ।
12... 22 पुराना पोष्टहरू।